JW FILM-Exhibition News-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
JW Film bụ onye na-ebubata igwe na-acha ọkụ ọkụ polyurethane (TPU) dị elu na teknụzụ nchebe ihu. Onye na-etinye akwa mkpuchi, ndị injinia akụrụngwa, ndị na-emepụta ngwa ọrụ na ndị nrụpụta ihe ngosi elektrọnik na gburugburu ụwa na-ele JW Film anya maka ihe nkiri arụmọrụ kacha elu JW Film bụ onye na-emepụta ihe nkiri mkpuchi TPU nke enweghị mkpuchi maka azụmaahịa zuru ụwa ọnụ.
JW Film na-eji usoro nke polyurethane na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka a nwee ike ịmepụta ihe dị egwu maka ihe mkpuchi PSA. Ihe nkiri ndị a na-agbanwe nke ukwuu ma na-enye nghọta doro anya, nkwekọ dị mma na akụkụ atọ, nguzogide UV, Klas-A na-emecha ọfụma ma jiri usoro ịmịpụ extrusion mepụta ihe nkiri kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ.
Teknụzụ nchedo elu JW Film nke dị elu, nke nwere n'ọtụtụ na ọtụtụ, iji gbochie ihichapụ, ibelata, na mbibi ndị ọzọ na-emebi ọla, iko, ma ọ bụ agba. Ejiri ya na ọtụtụ ngwa sitere na ahịhịa helikopta na ngwaọrụ mkpanaka ihe nkiri na-adịgide adịgide na-enye abrasion na mmetụta dị mma. Ha nwekwara ike ije ozi dị ka onye na-echebe mkpuchi mgbe ị na-ehulata ihe dị na breeki ígwè.
The vasatail film nwekwara ike formulated na antibacterial ngwugwu iji kpuchido ngwangwa na-ebupụta nke dijitalụ ngosipụta nwere otutu ọrụ. Mgbe mkpuchi na-echebe fim nwere ike ịnwụ na-ebipụ ka kpọmkwem nhazi iji gbatịkwuo ndụ nke ihuenyo mmetụ ngosipụta na ụdị dịgasị iche iche nke ngwaọrụ eletrọniki.
JW Film site na arụmọrụ kacha elu nke ngwaahịa a, teknụzụ dị elu na ogo dị mma, abụrụla ụdị ama ama ama ama ama ama ụwa niile. Kemgbe ọtụtụ afọ, na-ebu akara ahịa na ntụkwasị obi nke ndị ahịa, na ebumnuche nke àgwà mmụọ siri ike na nke ọhụụ na echiche ọrụ ndị mmadụ, na-atụ anya na ị ga-abụ ọkwa izizi ụwa nke agba mkpuchi agba agba.